Archive du 20181130
Fifidianana fihodinana faharoa Lesoka tokony hahitsy ny fanabeazana, hoy ny CFM
Nilaza ny fahitany ny voka-pifidianana ho filoham-pirenena tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny HCC Ambohidahy ny filoha lefitry ny komitin’ny fampihavanana Malagasy, Gerard Ramamimampionona.
Dr Jules Andriamaholison “Manatsara paikady ny K25”
Naneho ny heviny momba ny toe-draharaham-pirenena ny mpandinika politika Dr Jules Andriamaholison, mpikambana ao anatin’ny K25. Mazava ireny vokatra nomen’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana omaly ireny.
Bileta tokana – fihodinana faharoa Tsy hiova ny laharan`ireo kandidà
Miisa 10,3 tapitrisa ireo biletà tokana hampiasaina amin`ny fihodinana faharoa amin`ny fifidianana filohan`ny Repoblika eto Madagasikara izay hatonta any Afrika Atsimo.
CENI Madagascar Hanamafy ny fanatsarana ara-teknika
Hotanterahina amin’ny alarobia 19 desambra 2018 ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena.
Rehefa tsy mahay ny hira mangina
Salama Jean aa! Ianao hoy aho efa teneniko foana hoe mangina rehefa tsy hay ilay hira! Ny tononkira efa tsy alefanareo amin’izay laoniny fa mbola tsy hay intsony koa na mivalana na mahitsy ny hanaovanareo azy.
Fanakorontanana ataon’i Naivo Raholdina Miantso ny fanjakana handray andraikitra ny FLM
Nampahafantarina omaly alakamisy 29 novambra tetsy amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy Ambatovinaky ny olana mitranga momba ny tanin’izy ireo etsy Androhibe. Raha tsiahivina, tany efa nangatahan’ny fiangonana nanomboka tamin’ny taona 2003 io tany io ary nomen’ny fanjakana azy tamin’ny taona 2012.
Tongava saina amin’izay e !
Ny lasa tsy fanadino, hoy ilay fomba fitenintsika Malagasy. Andeha hampifandraisina hatrany amin’ny tantaram-pirenena tato anatin’ny folo na sivy taona teo ho eo ny zava-misy ara-politika ankehitriny.
Herinandron’ny ENS Ampefiloha Nafana ny hetsika ara-panatanjahantena omaly
Tsy mpampita fahalalana fotsiny ihany ny mpampianatra, hoy i dokotera Ramanambelo Mariette, talen’ny sekoly ambony ENS etsy Ampefiloha fa manabe sy mikolokolo olona ihany koa.
Efa lasa any afrika atsimo androany ny iraky ny Ceni hanao ny fividianana ny bileta tokana izay hampaisaina amin’ny fihodinana faharoa.
Vehivavy mpitandro ny filaminana Mbola vitsy no sahy misehatra eto Madagasikara
Nisy ny atrikasa notanterahin’ny solontenan’ny firenena mikambana niaraka tamin’ny solontenan’ny mpitandro ny filaminana tetsy amin’ny Carlton Anosy omaly alakamisy 29 novambra.
Fiampitana amin’ny angovo azo havaozina Tsy maintsy miroso i Madagasikara
Natao tao amin’ny minisiteran’ny Angovo tetsy Ampandrianomby ny tomban’ezaky ny sehatra angovo tamin’ny taona 2016-2017 omaly alakamisy 29 novambra. Noresahina tao ny tontolon’ny famokarana herinaratra nijerena ny antsipiriany amin’ny fiaviany sy ny fampiasana ireo angovo amin’izany.